सिके राउतको जनमत पार्टी कार्यालयको स्थापना – CIN Nepal News & Online Radio Nenwork
By सीआइएन सम्वादाता	 On २१ चैत्र २०७५, बिहीबार २१:५६ 1,267
श्याम सुन्दर सुतिहार, विराटनगर ।। स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका संयोजक सिके राउतले नेपाल सरकारसंग ११ बुद्धा सम्झौता पश्चात लहान वैठकले राउतको सयोजकमा जनमत पार्टी घोषणा गरेका थिए । सोही पार्टीको कार्यालय विराटनगरको हाटखोलामा रिवन कार्टी पार्टी कार्यालय स्थापना गरेका छन् । पार्टी कार्यालयको रिवन काटेर डा. परमेश्वर मुर्मुले जनमत पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । पार्टी उद्घाटन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै मुर्मुले भने नेपाल सरकारलाई हामाी घुडा टेकाएका छौ । मधेशीको अधिकारको लागि, मधेशी भूमिको लागि, मधेश देशको लागि आव हामी खोला रुपमा जनताको घर–घरमा गई मधेशको मुद्दाको वारेमा चर्चा गर्न पाउंछौ ।
आफ्नो मुद्दालाई जनता समक्ष पु¥याउंछौ । अन्तत ः हाम्रो उदेश्य स्वतन्त्र मधेश नै भएकोले जनमत पार्टीका हामी स्वयम सेवकहरु चौविसै घण्टा खटेर मधेशमा रहेको उपनिवेशलाई हटाउने उनको भनाई थियो । सयौको संख्यामा उपस्थित भएको स्वतन्त्र मधेश गठवन्ध तथा जनमत पार्टीका स्वयम सेवहरु अविर लगाई, कार्यकर्तालाई मिठाई खुवाई खुशियाली मनाएका थिए । केही दिन भित्रै जनमत पार्टीको जिल्ला समिति समेत गठन हुने भएको छ । अहिलेलाई मोरंग जिल्लाको संयोजक डा. परमेश्वर मुर्मुलाई तोकिएको छ । सिके राउतको उपस्थितिमा विराटनगरमा एउटा ठूलो सभा गर्ने भएका छन् । सो उद्घाटन समारोहमा पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, लगायतका व्यत्तित्वहरुको समेत उपस्थिति रहेहका थियो ।
स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनको नामवाट नेपाल सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाई धरपकड वढी भएकाले नेपाल सरकार संग ११ बुद्धा सम्झौता गरी सिके राउत खुल्ला राजनीतिमा होमिएका छन् । सिके राउतले प्रयोग गर्ने झण्डा, सिके राउतको नारा, मधेश देशको राष्ट्रि गान लगायतका सामग्री प्रयोग भएमा अव धरपकड हु“दैन भनी जनमत पार्टीका स्वयसेवकहरुले विश्वास लिएका छन् । तर पनि केही राउतको स्वयसेव माथि विशेष प्रहरीको निगरानी रहेको जनमत पार्टीकै एक स्वयम सेवकले वताए ।